Ezona zinwele zifanelekileyo | Amadoda aQinisekileyo
Ezona zinwele zifanelekileyo
Xa une iinwele ezilungileyo, eyona nto ibalulekileyo kukongeza ivolumu kwizinwele xa zizonke. Ukufumana esi siphumo, olona khetho lufanelekileyo kukukhetha ukusikwa kwegradient okanye maleko. Kwinwele ngokwayo, ungasebenzisa isomisi. Inye kuphela into ekufuneka uyiphephe kukuba ubushushu be isomisi hayi phezulu kakhulu.
Amacwecwe zigudile iinwele okanye ukugoba akuvumelekanga. Ayilungelanga iinwele ezintle njengoko ziya kugqibela zibuthathaka ngakumbi. Akukwacetyiswa ukuba usebenzise iimveliso ukuphazamisa inkqubo ye- iinwele. Kuhlala kunjalo iimveliso ndlongondlongo ezenza buthathaka iinwele kwaye ziya kubangela ukuba ziphele zisiwa.
1 Imvume yeenwele ezintle
2 Nika ivolumu kwizinwele ezintle
Imvume yeenwele ezintle
Kwizinwele ezintle, i esisigxina inokuba sisisombululo esifanelekileyo. Obu buchule buquka ukugoba iinwele ngokusisigxina, okusebenzayo kakhulu ukongeza ivolumu ezinweleni. Ngayiphi na imeko, lumka ukuba ungayenzi imvume kwi iinwele yomile okanye buthathaka.
Ukuba unayo iinwele efanelekileyo, kuya kufuneka ukhethe amaza. Kuzo zonke iimeko, akufuneki usebenzise gwenxa isigxina. Iimveliso ezisetyenzisiweyo zinoburharha.
Nika ivolumu kwizinwele ezintle
Nokuba loluphi uhlobo lwe corte esetyenziselwa iinwele ezintle, igama eliphambili 'ivolumu'. Ukunikeza ivolumu kwizinwele akukho nto isebenza ngakumbi kuneemveliso ezikhulelwe ngokukodwa kwesi siphumo. Zifumaneka kwikhemesti. Ngayiphi na imeko, iimveliso ezisekwe kwi iparafini.
Eli candelo liyingozi kwizinwele, ezinotyekelo lokophuka. Kungcono ukuthenga olu hlobo lwemveliso kwi-salon Indawo yokuceba. Unonophelo olongeza ivolumu ngokubanzi luboniswa ngendlela ye amagwebu umatshini yokubumba. Oku kusetyenziswa ngqo kwingcambu.
Lumka, kububuxoki ukukholelwa ukuba uhlamba rhoqo i- pelo kulungile kukwenza ube sempilweni. Ngaphandle kwento yokuba ishampu ineziphumo zokupha ivolumu kwizinwele, akucebisi ukusetyenziswa gwenxa. Iimveliso emazisetyenziselwe Hlamba iinwele kufuneka zivuselele kwaye zondle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ezona zinwele zifanelekileyo
Yile ndlela amadoda aneenwele ezintle afumana ngayo ivolumu
Imikhono esongiweyo, ukubamba kunye nokutsala umdla kwezikipa zakho